4 Makiyi Ekutora kuenda kune Smart Mobile Kushambadzira Strategy | Martech Zone
Chipiri, August 5, 2014 China, Kurume 3, 2016 Douglas Karr
Nharembozha, nharembozha, nharembozha… watoneta nazvo here? Ini ndinofunga tiri kushanda pamafoni masystem nehafu yevatengi vedu izvozvi - kubva mukugadzirisa nharembozha matemplate, kusanganisa anoteerera madingindira, kuvaka nharembozha. Muzvokwadi, ndinotenda mabhizinesi ari kutendeseka vachitarisa pawebhu yavo iripo kumashure sezvo kwakawanda kwekubatana nemabrugwa ikozvino kunotanga nefoni nhare - kungave muemail, pasocial, kana kuburikidza newebhusaiti yavo. Vatengesi veSavvy vari kutora mukana wekupa nharembozha.
Kushambadzira kwenhare inzvimbo nyowani yemabhizinesi mazhinji. Zvikamu zviviri kubva muzvitatu zvemabhizimusi zviri kushandisa imwe nzira yekutengesa nhare, uye mazhinji acho anga achizviita pasi pegore. Kunyangwe paine hutsva, ingangoita hafu yemabhizinesi anoti vari kuronga kuwedzera yavo yemari yekutengesa bhajeti muna 2014, uye 48% inoronga kuramba yakafanana. Uye zvinoita sekunge vazhinji vari kusvetukira mukushambadzira nharembozha nediki padiki pekutenda - zvikamu zviviri kubva muzvitatu zvinoti ivo havagone kuyera ROI pane kushambadzira nhare kana kuti havazive sei. Kana iwe uri kushamisika kuti ndeapi mabhizinesi anotarisira mukushambadzira nhare muna 2014, Aweber kuparadzaniswa 60 Yechipiri Marketer kuongorora mabhizinesi zana negumi neshanu pane yavo nhare yekushambadzira uye zvirongwa zvegore ra161.
Mhinduro yangu chete pane iyi infographic ndeyekuti ivo vanobvunza mubvunzo nhare mbozha kana nharembozha. Handitendi iwo mubvunzo unoshanda. Iwe unofanirwa kuva nhare mbozha. Kuva nefoni yekushandisa kunogona kutyaira zvakadzama kubatanidzwa kana kupa chakakosha chishandiso kunharaunda yako. Semuenzaniso, isu tine mutengi anotengesa lubricants isu takagadzira mobile Calculator application kubatsira vatengi vavo. Nhare mbozha haisi bhurocha, chishandiso.
Tags: 60 wechipiri mushambadziAWebernharembozha yekushambadziramafoni ekutengesa matambudzikonhare yekutengesa nziramobile kushambadzira ongororomobile optimizationwirirana pataniinoteerera email
Jan 22, 2016 pa 2: 50 AM
Ndisati ndaverenga chinyorwa ichi handifi ndakatarisa kushambadzira kwenhare. Mushure mekuverenga chinyorwa ichi ndakazoziva nezve mobile marketing. Ndatenda nekugovera chinyorwa chinodzidzisa. Keep Posting